စက်တင်ဘာလ 2014 |2၏စာမျက်နှာ 48 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 2)
Interra စနစ်များနှင့် TMD ဘိလပ်မြေမိတ်ဖက်
TMD, ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၏ဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့မိမိတို့၏ဖောက်သည်မီဒီယာဖိုင်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် QC စိစစ်အတည်ပြုဘို့အပြည့်အဝပေါင်းစည်း Workflows ပေး Interra စနစ်များနှင့်အတူလက်တွဲကြေညာခဲ့သည်။ TMD, ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စစ်ဆေးနေဖိုင်-based အရည်အသွေးကိုကိုထောကျပံ့ရန်၎င်း၏Mediaflex®မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်ကုန်သို့မီဒီယာ Interra တုတ် QC ပလက်ဖောင်းပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်သိရပါတယ် ...
ကုန်ပစ္စည်းများ NEW YORK အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာလ်တီမီဒီယာကုမ္ပဏီရဲ့ Suite သို့ပေါင်းစည်းခံရဖို့အားကစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆော့ဝဲ Tool ကို - Fluendo (www.fluendo.com), devices များနှင့် operating system မြား၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအပေါ်မာလ်တီမီဒီယာနှင့်ဗီဒီယိုဖွကြောင်းနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ, (www LongoMatch ဝယ်ယူခဲ့သည်။ longomatch.org), အသုံးပြုသူများကအားကစားဂိမ်းကိုဗီဒီယို feeds တွေကိုအပေါ်ကို real-time ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ Cross-platform ဆော့ဖျဝဲကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ LongoMatch software ကိုအသုံးပြုသူများက tag ကိုပေးနိုင်ပါတယ် ...
pixel ပါဝါဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်အဖြစ် 18 စက်တင်ဘာလ 2014 အပေါ်လွတ်လပ်ရေးဆန္ဒခံယူပွဲစကော့တလန်ရဲ့အခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲ၏ STV ရဲ့လွှမ်းခြုံအတွက်ဒေတာပေါင်းစည်းမှုကိုကြိုတင်ဖုန်းဆက်ဖို့နီးကပ်လွန်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူတို့အထူး, Pixel ပါဝါကနေဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးဒေတာဘေ့စတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေနှင့်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံတက်ဘလက်ကို အသုံးပြု. ပစ္စုပ္ပန်ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည် လာ. အဖြစ်ရလဒ် Charting ...
ol '' Blackmagic Pickathon ကြောင်း
လက်ပံ, အော်ရီဂွန်အစောပိုင်းသြဂုတ်လအတွင်း Pickathon ဂီတပွဲတော်တည်ခင်းဧည်; ထိုဖြစ်ရပ် Freemont ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာထပ်ကဒီစက်တင်ဘာလ 22nd ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဂီတချစ်သူများကဒီအာရုံခံအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီခြင်းငှါ, Pickathon ဂီတပွဲတော်မှာ Blackmagic အလှအပတစ် bevy မှကုသခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာခြောက်လ ATEM တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Switcher နှင့်အခြား Blackmagic devices များနှင့်အတူငါး Blackmagic စတူဒီယိုကင်မရာများကိုအသုံးပြုသွားမည် ...
ILOOK: သာလျှင်မြို့မှာရှိတဲ့အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြား (OTT) ပေးသူကျော်အဆိုပါ!
OTT ၏အယူအဆဟာနှစ်ပေါင်းတလျှောက်လုံးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယခုကျွန်တော်တို့ကို ILOOK နှင့်အတူအပြည့်အဝအားသာချက်ယူဘို့စစ်မှန်သော Avenue ရှိပါ! ကတီဗီကွန်ရက်တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်ကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်, သော်လည်းဤသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် TVapp, cable ကိုကျော်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဂြိုဟ်တုများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးရုပ်မြင်သံကြားပံ့ပိုးပေး။ ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများများတွင်မည်သူမဆိုတစ်ဦးငွေရစေသောတီဗီကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်လည်ပတ်နိုင်ရန်နိုင်ပါတယ် ...
စိန့် Edmund, ဗြိတိန်သင်ျဂွိုဟျ - Vinten®, Vitec Videocom တစ် Vitec Group မှကုမ္ပဏီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, လာမည့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားစဉ်အတွင်းစတူဒီယိုအတွက်အသုံးပြုရန်က Sky Sports နှင့်တစ်ဦး Vinten encoded ဒယ်အိုးနှင့် tilt ခေါင်းကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Vinten Vision ၏ 250E ဟာ virtual reality (VR) အပြောင်းအလဲနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ positional နှင့်မှန်ဘီလူး data တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ပြီးအသုံးပြုလိမ့်မည်ဆိုသောအကွက်တွင် features ...
ကျားရှုထောင့် "Peaky Blinders" ပေါ်တွင်ချွေနှင့်ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရေးအောင်မြင်ရန် Aframe အသုံးပြု
ခွဲဝေမှုရိုက်ကူး၏အမြန်နှုန်း, ပြပွဲဘော့စတွန်နှင့်လန်ဒန်စက်တင်ဘာ 25 များ၏မြန်ဆန်ထိရောက် Post-ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆို AIDS ရောဂါကနေဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်၏ရိုးရှင်း, 2014 - Caryn Mandabach Productions နဲ့ကျားရှုထောင့် Productions ဟာထိခိုက်လူဆိုးဂိုဏ်းဒရာမာအပေါ် Aframe ၏ cloud ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ "Peaky Blinders ။ " Aframe, စုဝေးခံရဖို့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်နေ့စဉ်သတင်းစာများနှင့်အခြားအကျင့်ကိုကျင့် enabled ...
Zylight F8 LED ကို Fresnel နှင့်အတူသစ်တော Track စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့ချီတက်ပွဲပြိုင်ပွဲရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလင်းများ
Los Angeles - Beaconsfield, ဗြိတိန်တွင်အမျိုးသားရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကျောင်း (NFTS) မှာလေ့ကျင့်ရေးသူလည်းမိမိကျောင်းဆင်းပွဲရုပ်ရှင်, ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ကျောင်းသား Sverre Sørdal, သည်လွယ်ကူသောလမ်းမယူခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစားသူတစ်ဦးအလွန်တင်းကျပ်စွာပစ်ခတ်မှုအချိန်ဇယားနဲ့အလွန်ခန့်မှန်းရခက်အလင်းရောင်နှင့်အတူသစ်တောအလယ်၌တစ်ဦးကိုခြေရာခံပေါ်တွင်ဆန္ဒပြပြိုင်ကားအကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ပစ်သတ်။ နစ်ခ်ကစီစဥ်ညွှန်ကြား ...
2 ၏စာမျက်နှာ 48«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»